သူ့အကြောင်း | Danya Wadi
By danyawadi December 22, 2019 Leaveacomment
By danyawadi December 15, 2019 Leaveacomment
စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်ဘုန်းမောင်၊ ဆရာကြီး၏သမီး ၊ စာရေးဆရာမ စောသန္တာထွန်း နှင့် ဦးဇော်နိုင် စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်ဘုန်းမောင် စုစည်းတင်ပြ- လူထုဝဏ္ဏ| မြန်မာစာပေလောက၏ တစ်စိတ် တစ်ဒေသဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ် ဘုန်းမောင်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်းတောမြို့နယ်၊ ငန်းချောင်းရွာ တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဖခင်မှာ အမ်အေအာနိုဝါရ်သီဟ (နဒဝီ) ဖြစ်ပြီး ဒေးဝန်ကြီး မျိုးရိုးဖြစ်သည်။ ဒေးဝန်ကြီးမျိုးရိုးမှာ မယုခရိုင်ရှိ အထင်ကရ မျိုးရိုးထဲမှ တစ်စု ဖြစ်သည်။ သားချင်း လေးယောက် အနက် အကြီးဆုံးသား ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဇော်မင်း (ခေါ်) ရှီးဗ္ဗလီ ဖြစ်သည်။ အခြေခံပညာကို ငန်းချောင်း တွင်သင်ယူခဲ့ပြီး အလယ်တန်း အဆင့်နှင့် အထက်တန်းအဆင့်တို့ကို မောင်တောမြို့ အထက်တန်းကျောင်း၌ သင်ယူခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘီအက်(စ)စီ […]
အငြိမ်းစား ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး နဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်
By danyawadi May 28, 2018 Leaveacomment
ဧရာဝတီ အသက် ၈၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ န၀တ အစိုးရအဖွဲ့ ဒုတိယအကြီးအကဲဟောင်း ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးနဲ့ မိုင်းဖုန်း ဆရာတော်တို့ တွေ့ဆုံသည့်ပုံများ ဒီကနေ့ လူမှုကွန်ရက် Facebook မှာ နေ့ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးဟာ ရာထူးကအနားယူပြီး ၂နှစ်အကြာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ရုတ်တရက် လေဖြတ်သွားတဲ့ အတွက် တပ်မတော် စစ်ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူပြီးတဲ့နောက် စင်ကာပူကို သွားရောက် ကုသမှု ခံယူထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကလည်း မိုင်းဖုန်းဆရာတော်နဲ့ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့ ပြင်ဦးလွင်နေအိမ် မှာ တွေ့ဆုံ တဲ့ ပုံတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးဟာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေး […]
By danyawadi May 12, 2018 Leaveacomment
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနင့်ဒုဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူတဦးအဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးသူဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကမ္ဘာကအကောင်းဆုံးဘဏဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဆုကိုချီးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်အလွန်တိကျပြတ်သားပြီးဖြောင့်မတ်သူတဦးအဖြစ်မလေးရှားတွင်လူသိများခဲ့ပြီးတချို့ကသူ့ကြောင်းမလေးနိုင်ငံချမ်းသာကြွယ်ဝလာခြင်းဟုနမိတ်ဖတ်ကြသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောမလေးလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တာကြောင်းမဟာသီယာပြီးရင်အဏ္ဏဝါဟာမလေးပြည်သူများ၏ရင်တွင်းမယ်ဟီးရိုးသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဏ္ဏဝါမှာမဟာသီယာနင့်မတူတဲ့အချက်များစွာရှိသည်၎င်းထဲမှတခုမှာစကားပြောစပ်ပြီးပြတ်သားသည်ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်မပြောတတ်စကားပြောရင်’အားမှန်’ပါသည်ဘွင်းဘွင်းပြောပြီးဖြောင့်မတ်သည်တနည်းပြောရရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနင့်တူသည်။ မလေးလူမျိုးများချစ်ခင်ရီုသေကြသည်။ ဗလီတခုကိုရောက်လာလျင်အားလုံးကအဏ္ဏဝါကိုစင်မြင့်ပေါ်တင်ကာမိန့်ခွန်းချွေစေပြီးဦးဆောင်ဝတ်ပြုစေကြသည်။ သူသည်ရှေ့ဆောင်အီမန်မ်တပါးကဲ့သို့ပင်ခွတ်ဘာဖတ်ပြီးရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုပေးသည်။ (မဟာသီယာကအဖိုးဖြစ်သူမှာအိန္ဒိယကာကာလူမျိုးဖြစ်၍အနည်းငယ်သွေးနှောသည်သို့သော်ဇနီးသည်မှာတော်ဝင်မိသားစုမှဖြစ်ပြီးဘုရင့်တပ်မတော်မှစစ်ဦးစီးချုပ်၏သမီးဖြစ်သည်စကားချပ်) မလေးလူမျိုးများသည်မဟာသီယာကိုအလွန်လေးစားဂုဏ်ယူတတ်ကြပြီးအဏ္ဏဝါကိုလည်းဒုတိယအဖြစ်နောင်တချိန်တွင်ရွေးချယ်ရမည့်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရာထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မမျော့်ဘဲမဟာသီယာကအဏ္ဏဝါကိုရာထူးမှထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းကြောင်းမလေးလူမျိုးများ၏စိတ်နှလုံးတွင်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကာစိတ်သောကရောက်ခဲ့ကြသည် ဒီထက်ဆိုးသည်မှာအဏ္ဏဝါအားလိမ်တူချင်းဆက်ဆံသည်ဟုစွပ်စွဲကာတရားစွဲဆိုစေခြင်းဖြင့်လူထုအုံကြွမူအထိဖြစ်လာစေခဲ့ကာမဟာသီယာမှာအကြမ်းနည်းဖြင့်အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ထိမ်းချုပ်ခဲ့ရသည်။ မောင်ကြီး(စစ်တွေ)
By danyawadi April 11, 2018 Leaveacomment
သူမရဲ့မျိုးဆက်၄၃ဆက်ကို ခြေရာခံပြီးနောက်မှာ အဲလိဇဘက်ဘုရင်မကြီးဟာ အစ္စလာမ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူကနေဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်တယ်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးဟာ တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဒီယူဆချက်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကို တော်ဝင်မျိုးနွယ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ Burke’s Peerage က ၁၉၈၆ခုနှစ်မှာပထမဆုံးထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တမန်တော်မြတ်ရှိစဉ်အခါကဘုရင်မကြီးရဲ့မျိုးရိုးကိုခြေရာခံခဲ့တယ်လို့ မော်ရိုကန်သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဒီယူဆချက်ဟာပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေအရ အဲလိဇဘက်ဘုရင်မကြီးရဲ့မျိုးရိုးဟာ ၁၄ရာစုက ကမ်းဘရစ်ကအာလ် အလယ်ခေတ်စပိန်မွတ်စလင်တွေကနေ တမန်တော်မြတ်ရဲ့သမီးတော် ဖွာတေမာထိဆက်နွယ်နေပါတယ်။ တစ်ချို့သမိုင်းပညာရှင်တွေ အလယ်ခေတ်အစောပိုင်းကစပိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မျိုးရိုးစီစစ်မှတ်တမ်းတင်ပညာရှင်တွေရဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေရှိပေမယ့်လည်း ဒီယူဆချက်ကိုထောက်ခံထားပါတယ်။ ဒါကို အီဂျစ်ရဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာရေးအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်ဟောာင်းဖြစ်သူ အလီဂိုမာကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ Burke’s ရဲ့ထုတ်ဝေမှုဒါရိုက်တာကအဲဒီနောက်မှာတော့ ၁၉၈၆ခုနှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ်မာဂရက်သက်ချာဆီ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့ စာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ “တမန်တော်မုဟမ္မဒ်မျိုးရိုးကနေတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာတဲ့တော်ဝင်မိသားစုကို မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်သမားတွေဆီကနေ အမြဲတမ်းကာကွယ်ဖို့အပေါ်မှာမှီခိုထားလို့မရနိုင်ဘူး”လို့ သူကသက်ချာဆီရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆက်နွယ်မှုဟာလူအများအပြားကိုအံ့သြစေလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ “တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဲ့သွေးတွေဟာ ဘုရင်မကြီးရဲ့သွေးကြောတွေထဲစီးဆင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်လူထုကသိရှိမှုနည်းပါးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးက ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။” လို့သူကထပ်ဖြည့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင်မကြီးဟာတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရဲ့အနွယ်တော်ဝင်ဖြစ်တာကို Burke’s Peerage က […]
By danyawadi March 22, 2018 Leaveacomment
သူသည် နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခရီးတလျှောက် လူယုံတော်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ လူမသိသူမသိနေထိုင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အားပေးထောက်ခံမှုဖြင့် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က သူ နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ ဦထင်ကျော်သည် စကားပြောနူးညံ့သိမ်မွေ့သူဖြစ်ပြီး ကဗျာစာပေချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အစိုးရ၀န်ထမ်းဘ၀မှ အနားယူခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်အချို့ပင် ကြာညောင်းခဲ့ပြီ။ အဆိုပါ လမ်းခရီး၏ လမ်းခုလတ်တွင် ဦးထင်ကျော်သည် အခြားသော ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားသူများနည်းတူ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သောသီတင်းပတ်အထိ ဦးထင်ကျော်ဆိုသော အမည်နာမသည် ပြည်ပအသိုင်းအ၀ိုင်းများမဆိုထားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပင် လူသိများသော၊ လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားသော နာမည်မဟုတ်ချေ။ ထိုသို့ လူသိနည်းသူဦးထင်ကျော်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်ကာလအတွင်း ပထမဆုံး ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောအစိုးရအဖွဲ့၏ ဥသျှောင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာမည်ဟုမည်သူကမျှ တွေးထင်မထားခဲ့ပေ။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ […]
မမေခ တာဝန်က အနားယူသွားတဲ့ သမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာ ရုပ်သေးဂုဏ်ထူးဆောင်သမ္မတလို့ သတ်မှတ်မှုတွေရှိပေမယ့်၊ သမ္မတကြီးဟာ သမ္မတရာထူးဆိုတဲ့ အရှိန်အ၀ါနဲ့ ထိုက်တန်ခဲ့သူဆိုတာကိုတော့ အများစုက လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ သမ္မတ ဦးထင်ကျော် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပေါ် နိုင်ငံရေးနဲ့ အလွှာပေါင်းစုံက သုံးသပ်ထင်မြင်ချက်တွေကိုတော့ မမေခ စုံစမ်းမေးမြန်း သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ဂန္တဝင်စာရေးဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ရဲ့သားတဦးဖြစ်တဲ့ သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်ဟာ စာပေလောက မှာ ဒလဘန်းဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ စာရေးသားခဲ့သူတဦးပါ။ စီးပွားရေး၊ အိုင်တီ ပညာရပ်တွေမှာထူးချွန်သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးနယ်ပယ် မှာလဲ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ အတူ လူသိများခဲ့သူ တဦးဆိုလဲမမှားပါဘူး။ နီးစပ် သူတော်တော် များများနဲ့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ သူဟာ အနေအေးသူ စိတ်သဘောထားဖြူသူ စေတနာကောင်းသူ ဘက်စုံထူးချွန်သူလို့နာမည်ရပေမယ့် နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်တာကာလမှာတော့ ဒီလိုထူးချွန်သူရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့မှု တွေကို […]
By danyawadi March 21, 2018 Leaveacomment
အမည် ။ ဦးဝင်းမြင့် အသက်။ ၆၆နှစ် လူမျိူးနှင့်ဘာသာ။ ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ ပညာအရည်အချင်း။ Bsc( Geology), H.G.P, R.L ဒီမိုကရေစီ ရေးဆောင်ရွက်မှု့များ ၁၉၈၈ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးဆန္ဒပြပွဲများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ နှင့်လူ့အခွင့်အရေးများအတွက်အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းမှု့များကြောင့်အာဏာပိုင်တို့၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကို(၃)ကြိမ်ခံခဲ့ရပါသည်။ အဖွဲ့ချူပ်မှပေးအပ်သောတာဝန်များ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ အဖွဲ့ချူပ်ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ အဖွဲ့ချူပ်၏ ဗဟိုအလုပ်အမှု့ ဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ အဖွဲ့ချူပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သောရွေးကောက်ပွဲရလဒ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဧရာဝတီတိုင်း ဓနုဖြူမြို့ နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁ )၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရခြင်း။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်း။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှရွေးကောက်ခံအမတ်ဖြစ်လာကာ […]
နိုင်ငံတော် အတွက်အသက် ပေးသွားသော ဦးကိုနီအား ရုပ်ထု ပြုလုပ်၍ ဂုဏ်ပြုမည်
By danyawadi February 16, 2018 Leaveacomment
လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင်လုပ်ကြံခံခဲ့ရသော တရား လွှတ်တော် ရှေ့နေဦးကိုနီအား လေးစားဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ရုပ်ထုပြုလုပ်၍ ဂုဏ်ပြုသွားမည်ဟု တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ယခုအခါတွင် ကော်မတီဖွဲ့စည်းလျက်ရှိပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောသည်။ နိုင်ငံတော်တာဝန်ဖြင့် ပြည်ပခရီးစဉ်အပြန်တွင်လုပ်ကြံခံခဲ့ ရသောကြောင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်စွန့်ပေးလှူ သွားသည်ဟု မှတ်ယူမိကြောင်း ယနေ့အထိ ပြန်တွေးမိ တိုင်း နှမျောတသ ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ ရုပ်ထုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးပါက ထပ်မံအသိပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အတွင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကြိုးစားသွားမည်ဟုသိရသည်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာ ကြီး “R. ဘော့စဝေါသ်စမစ်သ်”ရေးသားခဲ့သည့်မိုဟာမက်နှင့် မိုဟာမက်အဒယူဝါဒ
By danyawadi January 27, 2018 Leaveacomment
( Mohammed and Mohammadnadism wetter by R. Bosworth Smith ) ( ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာ ကြီး “R. ဘော့စဝေါသ်စမစ်သ်”ရေးသားခဲ့သည့်မိုဟာမက်နှင့် မိုဟာမက်အဒယူဝါဒ ) မိုဟာမက်သည်ကား လူတကိုယ်တည်းနှင့် “ဆီဇာ” လည်းဖြစ်၏။ ပုပ်ရဟန်းမင်း သာသနာပိုင်ကြီးလည်း ဖြစ်၏။ ထူခြားသည်က သာသနာပိုင်ဖြစ်လင့်ကစား၊ သာသနာပိုင်ဟူသောအဆောင်အယောင်၊ ကိန်းခန်း ကြီးမျိုးများမှ ကင်းမဲ့သူဖြစ်သည်။ “ဆီဇာ”ဟုဆိုလင့်ကစား”ဆီဇာ”လိုအာဏာမရစ်မူးပါ။ အခိုင်အမာစစ်တပ်ကြီးလည်းမရှိပါ။ သက်တော်စေါင့် တယောက်တလေမျှပင်မရှိပါ။ အဆောင်အယောင် နန်းတော်တစ်ဆောင်ပင်မရှိပါ။ အခွန်အတုတ်စည်း ကျပ်ခြင်းတစ်စုံတရာလည်းမရှိပါ။ လူတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်သည့်အချက်တစ်ခုမှာ အလွန်တိကျစစ်မှန်သော ကောင်းကင်ကျလမ်းညွန် အတိုင်း တိတိကျကျတိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်စိုးမိုးသွားသူ ကတော့ “မိုဟာမက်”ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်လက်နက်ကရိယာတန်ဆာပစ္စည်းတစ်ခုမှ မပါဘဲ၊ မည်သည့် ထောက်မမှုမှမပါဘဲ အလုံးစုံသော […]